I-Lac La Hache... UNXWEME lwamachibi luyindawo entle ! - I-Airbnb
I-Lac La Hache... UNXWEME lwamachibi luyindawo entle !
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguBill & Colleen
UBill & Colleen yi-Superhost
Wamkelekile kwichibi elihle iLac La Hache. Ikwindawo ephakathi kweemayile eziyi-100 kunye neWilliams Lake, ikufutshane neevenkile zokutyela, iindawo zokubukela iimuvi kunye nazo zonke ezinye izinto ezinokusetyenziswa.
Induli yokutyibiliza emkhenkceni ikumgama wemizuzu eyi-20 kuphela.
Ngobude obuziikhilomitha eziyi-19, yeyona ndawo ifanelekileyo yokuzonwabisa. Ukususela kwintsasa yokuloba, iKokanee okanye iLake Trout, ukuya kutsho emva kwemini ye-wakeboarding okanye i-tubing, eli ichibi elihle kakhulu kwiCariboo ngoko qiniseka ukuba uza nesikhephe sakho.
Sinikezela ngawo wonke umgangatho osezantsi, oza kuthatha abantu abayi-6 ngokukhululekileyo. Eli gumbi LITSHA elineebhedi ezine eziqhelekileyo zabantu abadala, ( ngalinye linokukhanya kwalo kokufunda, umbane neeplagi,) kunye negumbi elihle elinomnyango ophumela ngaphandle, elilala abantu abayi-2 ngokukhululekileyo kwibhedi enkulu liza kuqiniseka ukuba uyayithanda.
Sinikezela ngazo zonke izinto zebhedi, iiduvethi, iingubo kunye neetawuli, esizihlamba yonke imihla. Ukongezelela, le ndawo inendawo "yokuhlamba iimpahla kwigumbi elinomnyango ophumela ngaphandle", ukuze ungasokoli.
Igumbi lokuhlambela elikumgangatho ophezulu line-shower enentloko yemvula kunye nentloko yeshawa edongeni.
Ngenxa yeli xesha lokungasondeli ebantwini, "iindawo zethu EZISETYENZISWA NGUMNTU WONKE", ngoku zenzelwe ukusetyenziswa ziindwendwe kuphela, nto leyo ethetha ukuba awunikezeli nabani na ngale ndawo. Ezi ndawo ziquka igumbi lemidlalo, eliyindawo entle yokuqubha okanye yokuphumla ngemidlalo emininzi yebhodi. Ibhafu enamanzi ashushu encinci ephandle, ekwi-gazebo emhlophe eboniswe kwiifoto.
IGQITYIWE !!! Njengoko besithembisile, ngoku eli
gumbi linendawo entle yokuhlala phandle, kunye nendawo yakho yokugaya inyama phandle. Le ndawo ifumaneka ngaphaya kweHot tub, nto leyo eyenza ibe yindawo entle yokuncokola ngeglasi yewayini emva kosuku olunzima echibini : )
Ngobusuku basehlotyeni obufudumeleyo usenokufuna ukuhambahamba uze ubuke izindlu ezininzi ezintle ezikweli cala lechibi.
Umbuki zindwendwe ngu- Bill & Colleen
Ujoyine nge- 2020 Februwari
Ngenxa yokuba sihlala kwindawo yakho, ukuba mhlawumbi siye sazihoya naziphi na izinto esizifunayo okanye esizidingayo, siyakufowunela, emva kokuba ukuqinisekisile ukubhukisha kwakho.
Sikhangele phambili ekwenzeni iholide yakho ibe yiyo yonke,
Ngenxa yokuba sihlala kwindawo yakho, ukuba mhlawumbi siye sazihoya naziphi na izinto esizifunayo okanye esizidingayo, siyakufowunela, emva kokuba ukuqinisekisile ukubhukisha kwakh…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Lac la Hache